Sida loo soo saaro 3D dusha Google Earth ilaa AutoCAD - Geofumadas
Iibsiga 3D Dhulka Google Earth ilaa AutoCAD
Febraayo, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps
Waxaan u isticmaalnay inaan ka hadalno sida soo dejinta sawir laga bilaabo Google Earth ilaa AutoCAD hadda waxaan ku aragnaa sida loo soo saaro dusha iyo sameynta sawirkani waa midab waxayna ka ugaarsan kartaa 3D.
Trick waa isku mid ah waxaan ku aragnaa Microstation, abuurista wax xitaa xitaa waxay xallisaa dhibaatada sawiradu ku dhexjiraan.
1. Xulo Sawirka Google Earth
Waxaa looga baahan yahay in la furo Google Earth, lakabka dhulka, farqiga u dhaxeeya waqooyiga iyo aragtida mawduuca. Nidaamka ugu wanaagsan ee aad haysato waxaan ku heli karnaa xal wanaagsan, sida aan ka wada hadalnay boostada hore.
2. Soo saar mesh 3D
Markaad fureyso AutoCAD, waa inaadan hoos u dhicin daaqada GoogleEarth, ama ha xirin, laakiin ha ahaato aragti ugu sareysa ee aad rabto inaad qabsato.
Kadib waxaan dhaqaajineynaa sumadda ku xusan dhanka midig, adoo adeegsanaya amarka qoraalka 'ImportGEMesh'
In case of Map3D AutoCAD ama AutoCAD Civil 3D, mesh u dhexeeya georeferenced ugaarsi isku duwaha sanduuqa Google Earth (bixiyo nidaamka qiyaas ah ay barbaro galeen in isticmaalka waxaa lagu qeexay) iyo image waxay ugaadhsataa sanduuqan.
Waa in aan qabto mid ka mid ah laba barnaamij oo hore, laakiin kaliya AutoCAD ama doorasho Architectural shaqeysiin doonaan si ay u muujiyaan lla ee koonaha bidix ee hoose iyo faylka la galin doonaa cutub oo cabbirka ee mesh a (3D mesh) ee 32 ka sanduuqyada 32 . Isla markiiba, nidaamka ku weydiin doona labada geesood oo ah image iyo wareeg.
3. Sawir sawirka dusha sare
Haddii waxa la doonayo ay tahay in lagu arko muuqaalka dushooda dusha sare, ikhtiyaarka "macquul ah" waxaa laga soo xushay "3D Moding" panel
Ka dibna dooro qaar ka mid ah aragtiyada fududeynaya aragtida isometric.
4. Ku dhajinta sawirka midabka
Inkasta oo sawirka laga keeno sawirada, sababtoo ah gardarrada Google, haddii aad isticmaasho hidaada aad u adeegsanayso sawirada waxa aad ka heli kartaa midabada sida ku qoran tallaabooyinka soo socda:
Sawirka muuqaalka ah ee Google Earth, waxaan ku kaydineynaa faylka ikhtiyaarka / kaydinta / kaydinta sawirka
Kadib marka laga soo bilaabo AutoCAD, ee guddiga qalabka, waxaan ku dhejin karnaa sawir ahaan
In cutubyada miisaanka waxaan ku meelaynaynaa in ay ku haboon tahay (ku habboon gizmo)
Xulashada fiilooyinka (Foynta, V foornada) waxaan u xilsaarnaa 1
Marka la eego fursadaha furfuran ee ka muuqda sawirada masaajidka (U-offset, V offset) waxaan u xilsaarnaa 0
Wareegga waxaan ku meeleynaynaa 0 Hadda waxaan ku wareejinaynaa sheygaas shaashadda annaga oo adeegsanayna hannaanka «materialmap» oo leh ikhtiyaarka «planar» Oo diyaar ah, waxaan u beddeleynaa qaabka «aragtida dhabta ah ee 3D» qaabka loo yaqaan 'shadowmode'
5. Ku rakibida fidinta
Si aad u rakibtid codsigan waa in la soo dejiyaa laga bilaabo bogga shaybaarka AutoDesk. Marka faylka la xakameynayo, waa la fulinayaa oo waddada rakibida ee version AutoCAD waa in la doortaa halka aan dooneyno in la isku xiro, haddii ay jirto in ka badan hal barnaamij, rakibidda waa in loo sameeyaa mid kasta.
Inkasta oo ay tahay nidaam loo oggol yahay Google Earh, muuqaalku wuxuu ku yimaadaa miisaanka midabkiisa oo aan midab lahayn, oo ah shuruudaha Google.
Qalabkani wuxu la shaqeeyaa kaliya 2008, labadaba AutoCAD, AutoCAD Architectural, AutoCAD Xogo 3D iyo AutoCAD Map 3D.
Marka laga hadlayo AutoCAD madaniga 3D 2012 iyo 2011 horeyba waa loo dhafay. Haddii aadan haysan Civil3D, waxaad ku samayn kartaa Plex.Earth dheeraad ah
Map-ka AutoCAD AutoDesk 3D Google Earth
Post Previous«Previous Keenista Google Earth Sawir leh AutoCAD
Post Next Qoraa Live for bloggers la kala dirayNext »
13 Jawaab in "Sida loo soo saaro 3D dusha ka muuqda Google Earth ilaa AutoCAD"
Adigu xaq ayaad tahay, AutoDesk way ka laabatay xilligii ay bilaabatay AutoCAD 2013, maxaa yeelay isdhexgalka Google Earth ayaa lumiyay taageeradii.
Civil3D 2013 kuma sii darin nidaamka soo dejinta qaabka dijitaalka ah iyo sawirka satellite-ka ee Google Earth.
ha soo dajinin xiriirka otodesk ee aad soo dirtay
tababare GIS isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiib wanaagsan ayaan helay meesha ay sawiradu yihiin.
waad ku mahadsantihiin!
Fiiri jidka, waxaan fahamsanahay in marka la soo celiyo ay mar hore ku kaydsan tahay meel.
Hubi maamulaha raajada
Waxaan sawir ka qaaday dhulka google ee cadawga madaniga ah, sida aan u kaydiyo sawirkaan Cad cad, oo ka shaqeynaya Microstation tanina waa mid sahlan.
tinjodocavaco isagu wuxuu leeyahay:
Hello, su'aalahaygu waa sababta oo ah waxaan soo iibsaday AutoCAD 2009 iyo marka aan soo galo qaynaha taliska ImportGEMesh wuxuu ii sheegayaa in aan amarka la aqoon. Waxaan sugayaa jawaabtaada, aad ayaad u mahadsantihiin!
Nooca "shaashadda" waa amar kuu oggolaanaya inaad kala doorato dhowr nooc oo muuqaal ah oo ay ka mid tahay "wax macquul ah"
FABIAN isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, qodobkaagu waa mid aad u xiiso badan, laakiin waxaan ku weydiinayaa su'aal, ma ku caddeyn kartaa barta '3 dhibic sida aad u hesho aragtida qaabka'? Maxaa yeelay anigu ma heli karo wax la mid ah iyo wax yar oo kale, marka aad tiraahdo "Oo diyaar, waxaan beddelnaa qaabka "Himilada dhabta ah ee 3D aragtida ah" ee qaabka hooska ah (shaashadda) », ma heli karo amarradaas, wax yar ayaad u macnayn kartaa iyaga, Waxaan isku dayayaa inaan barto qaybtan tusaalaha ah, sidaa darteed waxyaabo qaar oo laga yaabo inay aasaasi kuu yihiin, ayaan la aqoonin aniga.
Mahadnaq iyo qoorta
Adeegyada GIS isagu wuxuu leeyahay:
Ka saar liiska macluumaadka ... Waad ku mahadsan tahay wadaag boostada wanaagsan ..
Waxaa jira siyaabo dhowr ah, marka laga eego sawirka muuqaalka, ee Google Earth, ka dhigo lakabka dhinaca muuqaalka bidix ee kale.
In caymiska kaalinta firfircoon jira images, haddii aad riix on kubada ku jirta xarunta, si faahfaahsan ee image kacdo iyo sidoo kale xiriir ah in ay online iibsadaan
Haddii ay dhacdo sawirka sawirka digital-ka, waxaad ku samayn kartaa jihadaas
Halkaas waxaad ka dooran kartaa qaabka, nooca sawirka aad xiiseyneysid iyo marka aad diyaar u tahay waxaad adeegsaneysaa batoonka iibsashada ee "badhanka dalbashada ama daabacaadda" badhanka
halkaas waxaad dooran kartaa habka, nooca sawirka ee adiga aad xiisaynayso iyo markaad diyaar u tahay inaad isticmaasho badhanka iibka.
cinwaanka isagu wuxuu leeyahay:
sideen u iibsan karaa (iibsashada) sawirka satalaytka ah ee xaafaddayda, fadlan ii sheeg fadlan.
Post wanaagsan, aynu isku dayno.